ဂဇက်ပွဲက ဓာတ်သေများ (၃) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Best Web Awards » ဂဇက်ပွဲက ဓာတ်သေများ (၃)
Posted by ဂန္ဓာရီ ဆြာအုပ် on Jan 23, 2013 in Best Web Awards, Creative Writing, Myanmar Gazette | 28 comments
မိတ်ဆက်စကားပြောခန်း က ပုံလေးတွေတင်ပေးလိုပ်ပါတယ်.. movie ကယူထားတာမို့လို့ ကွာလတီ သိပ်မကောင်းတာ ကို ခွေးလွှတ်ပါ.. movie လိုချင်ရင် တောင်းနိုင်ပါတယ်..
ညဉ်း က လူဆိုး ပဲ။ ကျုပ် သိပြီးသား ကျုပ် မာမီ ကျတော့ စာတန်း ကြီး ထိုး ပေးပြီး ကျန်တဲ့ သူတွေ မှာ မပါတော့ ဘယ်သူက ဘယ်သူ ဖြစ်နိုင် မလဲ သိ ချင်လွန်း လို့ ဂဇတ်ကွန်ဖရင့် ပိုစ့် တွေပြန် ဖတ်လိုက် ဓါ့ပုံတွေပြန် ကြည့်လိုက်နဲ့လူလဲ မူးနေပြီ။
နောက်တစ်ခါ သိချင်ရင်လာခဲ့ တော့ ဗျာ
ပါးမှာ သနပ်ခါး နဲ့ ရွာသူပါချင့် …
ဒီပွဲကို ကျော်ဟိန်းရဲ့ညီလာမယ်ဆိုတာ သိရင် လာဖြစ်အောင်လာပါတယ်ဗျာ
ပုံတွေကြည့်ပြီး တစ်ပုံက ကျော်ဟိန်းနဲ့တူတယ်လို့ စိတ်ထဲမှာတွက်နေတာ
ဆြာအုပ်ရေ video ဖိုင်ရယင်လိုချင်ပါကြောင်း…
ဟယ် ….. ဂမ္ဘီရဆြာအုပ်ဆိုတာ နယ်နယ်ရရလူ မှုတ်ဘူးတော့ …….. ။
အစီရင်ကောင်းတွေနဲ့ ……. အာစေးထည့်ထားသလားမှတ်ရတယ် ….. တစ်ယောက်မှ အသံမထွက်ဘူး ၊မဖျက်ခိုင်းဘူးတော့ …… ။ ကန့်ကွက်မဲ တမဲမှ မရှိပဲ … လူစုံတက်စုံဖော်ပြနိုင်စွမ်းရှိလွန်းလို့ …. congratulation ပါရှင့် … ။ တွေ့ ဆုံခွင့်ရတာလည်း အများကြီး ၀မ်းသာပါတယ် ။
အကုန်လုံး အပြုံးတွေ နဲ့ လှ နေတာပဲ
ပျက်တဲ့အထဲ….. quality မကောင်းတဲ့အထဲ၊
ဒို့ပုံ ပါမသွားလို့ ကံကောင်းတယ်ပြောရမလား မသိ၊
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ကျေးဇူး ကမ္ဘာပါ။
လိုမှ passport ဓါတ်ပုံသာ ရိုက်တတ်တဲ့ သူအဖို့
MG တွေ့ဆုံပွဲ ဓါတ်ပုံတစ်ခု အမှတ်တရ- ရသွားတဲ့အတွက်
ခိခိ ဒီပို့စ်ထဲက ရွာသူားတေ အချောဆုံးဗြဲ
ကြည့်ရတာ သီချင်းတွေ ဆိုနေကြသလို..
နောက် တွေ့ဆုံပွဲကျရင် မိတ်ဆက်စကားတင်မဟုတ်
သီချင်းတစ်ပုဒ်စီ ဆိုပေးကြဖို့ အစီအစဉ်ဆွဲထားစေလိုပါတယ်..
ဗွီဒီယိုဖိုင်လိုချင်ပါတယ်ရှင့်။ ကိုရင်မောင်လိုပဲ အီးမေးလ်လိပ်စာ ပေးရင် ပို့ ပေးပါသလား။ တခြားသော နည်းလမ်းများရှိရင်လည်း သိပါရစေ ဆရာအုပ်ရှင့်။
ဆြာအုပ်ရေ video ဖိုင်လေးလိုချင်ပါတယ်ရှင်
မမိုချို ရေ နံပါတ် ၂၁ က Kthwinzayarmyo ပါ။ တွေ့ဆုံပွဲ မစခင် မမိုချို အမေနဲ့ တ၀ိုင်းထဲ
ထိုင်ခဲ့သေးတယ်။ ဆုယူဖို့ ပွဲစတော့ ရှေ့ဆုံး ကို အမေ ပြောင်းသွားတယ်။ ပွဲမပြီးခင် ကျွန်တော်
လည်း ညီမင်္ဂလာဆောင် ရှိတော့ ပြန်ပြေးသွားတယ်။ ကျန်တဲ့ နံပါတ်တွေက ………..
မိန်း ကလေး တွေ တော့ တော်တော် များများ ကို နာမည် နဲ့ တွဲ မိပေမယ့် ယောက်ျားလေး တွေ တော့ တ၀က်လောက်ပဲ မှန်း လို့ ရတယ်။
အရီးလေးလည်း ဟိုဖက် ဖတ်လိုက် ပုံတွေပြန်ကြည့်လိုက်နဲ့
ဒါနဲ့ စကားမစပ် မမိုချိုအမေ က ချောချက်တော်
မမိုချိုလည်း အမေတူဆို ချောမှာ(စိတ်ရင်းဖြင့် ပြောခြင်းဖြစ်သည်)
ဘော်ဒါတွေ စုံလာပီဆို မိုက်ခဲမယ် .. ရို့ .. ရို့ ..
ပျော်စရာတွေ ကြုံလာပီဆို မိုက်ခဲမယ် .. ရို့ … ရို့ ..
အာရုံတွေ နောက်နေခဲ့ရင်ဂေါ .. မိုက်ခဲမယ် .. ရို့ .. ရို့ …
ဒဂယ် .. ဒဂယ် …
မိုက်ကို တအား ခဲနေဂျတူဒွေဘာလား ကွယ်ရို့ …
မသိရင် .. ရှိုးပွဲမှာလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့ …
အောက်ဆုံးပုံက တစ်ယောက်က မိုက်ရင် ထွက်ခဲ့ပါ တဲ့
အဲ့ကောင် ဘယ်ကောင်းတုံးကွ …
မဟာရာဇာ အံစာတုံး တဲ့တွ … ငွင်းး ငွင်းး
အဟီး … ညာသန်တွေ များပါကြောင်း ….
ဆရာအုပ်ရေ…………. ဗွီဒီယိုဖိုင်လိုချင်ပါတယ်……………….ပို့ပေးပါဗျို့…………………… ရွာသူားချောချောလေးတွေကို ဓာတ်သေကော ဓာတ်ရှင်ပါကြည့်ချင်လို့ပါ…………..
အီးပေးမှ ပို့လို့ရမှာ ပေါ့ဂျ..